Amaphupho ngokubeletha – iAfrika
Amaphupho ngokubeletha (ukuthola umntwana)
Uma ungumuntu wesifazane uphupha ubeletha umntwana, lelo phupho lingaba nezincazelo ezahlukahlukene. Izincazelo zivela ekutheni ubelethe kanjani ephusheni lakho. Uma uphupha ubeletha kabuhlungu noma umntwana enqaba ukuphuma, lokho kuyibika lokuthi kukhona izinto okungezakho (imvamisa inhlanhla) okufanele ngabe sezifikile kuwena kepha kunomuntu okuvimbile lokho. Kanti uma uphupha ubeletha kahle nomntwana aphume ekhala ngengokujwayelekile, lokho kubika ukuthi kunenhlanhla … Read more
Tags Ukubeletha, Ukuthola umntwana
Asho ukuthini amaphupho ngokubeletha? Lokhu kuhlanganisa ukuzala, ukuphuphuma kwesisu nokukhulelwa.
Amaphupho ngokuphuphuma kwesisu
Uma uphupha ukuthi umuntu wesifazane uphuphume isisu kusho ukuthi uphathina wakho uzohlushwa yizinkinga empilweni yakhe.